Ihe Nlekọta 5 kacha elu nke inweta Phosphatidylserine (PS) -Na-enye ndụmọdụ
Mbido > Phosphatidylserine (PS)
Isi uru ise nke iwere Phosphatidylserine (PS)
N'echiche anyị, ndị Phosphatidylserine bụ ihe mgbakwunye kachasị mma dị ugbu a na ahịa si Cofttek. Anyị na-ewetara ihe kpatara anyị iji kwado nhọrọ a. Nke mbu, mgbakwunye a na - enye ego kacha mma maka ego - n’ime oke osimiri nke ngwaahịa ndị dị oke ọnụ, mgbakwunye Phosphatidylserine a dara n’akụkụ ọnụ. Nke abụọ, a na-eme mgbakwunye a site na Cofttek na ụlọ ọrụ nyocha, ya mere, enwere ike ịnwale ogo ya. Anwalela ngwaahịa a maka ịdị ọcha yana ike. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ezigbo mgbakwunye Phosphatidylserine, biko kpọtụrụ anyị cofttek.com.
Phosphatidylserine (PS) Ajụjụ
Gịnị bụ Phosphatidylserine (PS)?
Nkọwapụta (Phosphatidylserine)PS) bụ phospholipid na onyinye dị ezigbo nso na eriri nri nke a na-ahụkarị na anụ ahụ mmadụ. Phosphatidylserine na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ịkpụkọ ọrụ ma dị oke mkpa maka ọrụ mmuta dịka Phosphatidylserine na-eme ka ịnyefe ozi n'etiti mkpụrụ ndụ akwara.
Na nkezi, nri nri ọdịda anyanwụ na-enye ihe ruru 130 mg nke Phosphatidylserine kwa ụbọchị. Azụ na anụ bụ ezigbo ụzọ Phosphatidylserine, nke a na-achọpụtakwa n'osimiri mmiri na ngwa nri. Soy lecithin bụ ihe ọzọ dị mma na Phosphatidylserine. Agbanyeghị, na agbanyeghi Phosphatidylserine site na anụ ahụ nwere ike mejupụta ya ma rie nri site n'ụdị isi mmalite, nyocha nke mbụ na-egosi na ọkwa ya na-ada na afọ. Ya mere, n’ụbọchị ndị a, a na-akwalite mgbakwunye Phosphatidylserine, ọkachasị n’ebe ndị okenye nọ na-edebalata ọdịda ọ bụla na ebe nchekwa na ọrụ ọgụgụ isi.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọchịchọ maka mgbakwunye Phosphatidylserine amụbaala nke ukwuu ebe ọ bụ na mgbakwunye Phosphatidylserine ka a na-ahụta dị ka ọgwụgwọ dị ndụ maka ọnọdụ dịgasị iche iche, dịka nchekasị, Alzheimer, nsogbu mwepụ-adịghị mma, ịda mbà n'obi, nrụgide na ọtụtụ sclerosis. Na nke ọzọ, a na-amarakwa mgbakwunye mgbakwunye Phosphatidylserine iji welie mmega ahụ, mmega ahụ, ọnọdụ na ụra.
N'isiokwu a, na-atụle ọtụtụ ọrụ na uru Phosphatidylserine, anyị ga-egwu ala miri iji kpughee mgbakwunye Phosphatidylserine kachasị mma ugbu a n'ahịa.
Kedu ihe bụ phosphatidylserine dị mma maka?
Phosphatidylserine bụ ihe nwere abụba a na-akpọ phospholipid. Ọ na - ekpuchi ma chekwaa mkpụrụ ndụ na ụbụrụ gị ma buru ozi n'etiti ha. Phosphatidylserine na arụ ọrụ dị mkpa n'ime ka uche gị na ncheta gị dị nkọ. Nnyocha ụmụ anụmanụ na-egosi na ọkwa nke ihe a na ụbụrụ belata site na afọ.
Ndi phosphatidylserine na aru oru?
Inweta phosphatidylserine nwere ike imeziwanye ụfọdụ mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer mgbe izu 6-12 gachara. O yiri ka ọ kachasị dị irè na ndị nwere obere mgbaàmà. Agbanyeghị, phosphatidylserine nwere ike ịkwụsị ịdị irè yana ogologo oge.
Phosphatidylserine ọ na - eme gị ụra?
Phosphatidylserine bụ ihe mgbakwunye na-edozi ahụ na phospholipid nke na-akwụsị nrụpụta hyperactive nke anụ ahụ, na-ekwe ka ahụike, ogo cortisol dị elu belata, yana n'ihi ya, ụra zuru ike na-eme.
Kedu uru nke phosphatidylserine?
Ka anyị leba anya na ụfọdụ uru bụ isi nke Phosphatidylserine (PS):
Ọ bụ Ọgwụgwọ Ngwọta Dị Iche Megide Nghọta na Mmetụta Ọgwụ
Nnyocha mbụ emere na ụmụ anụmanụ gosipụtara na mgbakwunye nke Phosphatidylserine dị ogologo ma ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ịda mba ma ọ bụ gbanwee ya na oke. N'ịgbaso mkpebi ndị a dị mma, a na-eduzi ọmụmụ ihe iji nyochaa mmetụta nke nri Phosphatidylserine na ụmụ mmadụ na ọtụtụ ọmụmụ gosipụtara eziokwu ahụ na ntinye 200 nke intravenous nke Phosphatidylserine na ndị ọrịa Alzheimer na-eme ka ogo dopamine na serotonin dịkwuo elu, homonụ abụọ ahụ na-edeba aha dị ukwuu n'ihi ọnọdụ ahụ. Karịsịa, Phosphatidylserine na-arụkwa ọrụ dị mkpa nke ịchekwa metabolism metabolism, nke na-enyekwa ahụ efe na ọrịa ahụ. (2) Kwusara: Phosphatidylserine na ụbụrụ mmadụ
A Na-ejikarị Ya Maka Nootropic Mmetụta Ya
A na-enyekarị ndị Phosphatidylserine mmezi ka ọ mee ka uche ha dịkwuo mma ma kwụsịkwa iche echiche. Nnyocha izizi nke mụrụ banyere mmetụta Phosphatidylserine na ọrụ ebe nchekwa na ụmụ mmadụ meworo agadi nwere nkwarụ na-enweghị nsogbu metụtara njikọta Phosphatidylserine nke 300mg ruo ọnwa atọ na ebe nchekwa nwere ọhụụ. Nnyocha ọzọ nyochara mmetụta mmanụ azụ Phosphatidylserine na ebe nchekwa ma kpughee na mgbakwunye Phosphatidylserine mere ka okwu ngwa ngwa cheta ihe ozugbo na ndị agadi ruo 42%. Ya mere, Phosphatidylserine nwere mmetụta nootropic n'ezie n'ahụ ahụ. Agbanyeghị, nyocha banyere ịdị irè nke Phosphatidylserine sitere na ahịhịa iji gbochie afọ ojuju metụtara afọ ole na ole ka achọrọ ọtụtụ ọrụ na mpaghara a.
③ Phosphatidylserine Intake Na-esonyekwa na Exrụ Ọrụ Mmezi
Otu akụkọ bipụtara na Ọgwụ Egwuregwu kpughere na enwere ihe akaebe zuru oke iji gosipụta na mgbakwunye Phosphatidylserine jikọtara ya na arụmọrụ egwuregwu na arụmọrụ ka mma. Ọmụmụ ihe ahụ kwukwara na mgbakwunye Phosphatidylserine na-ebelata mgbu ahụ yana yana mmadụ nwere ike ịmalite mmerụ ahụ. N'otu aka ahụ, nchọpụta ọzọ kpughere na mgbakwunye Phosphatidylserine maka izu isii mere ka ndị golf si apụ ma jikọta Phosphatidylserine na caffeine na vitamin na-ebelata mmetụta nke ike ọgwụgwụ mgbe emechara ahụ. Agbanyeghị, ekwesịrị iburu n'uche na mmelite ndị a anaghị akara oke.
Sp Phosphatidylserine Na - enyere Aka Fightda Mbibi
Na 2015, nnyocha e bipụtara na Ọrịa Uche kpughere na n'ime ndị dị afọ 65 na karịa, nri Phosphatidylserine, nri DHA na EPA mgbe niile nwere ike belata ịda mbà n'obi. N'otu aka ahụ, nchọpụta ọzọ kpughere na mgbakwunye Phosphatidylserine na-akwalite mmetụta nke afọ ojuju na obi ụtọ mgbe oge mgbatị ahụ gasịrị site na mbenata ogo nke cortisol na-akpata nrụgide ya bụ hormone nrụgide.
⑤ Enwere ike iji ya na-agwọ ADHD na ụmụaka
Otu omumu ihe omumu ihe omumu nke 2012 nyochare uto nke Phosphatidylserine na umuaka nwere ADHD ma obu nsogbu nlebara hyperactivity aghara. 200mụaka 15 nwere ADHD sonyere n'ọmụmụ ihe ahụ, bụ nke kwubiri na izu 3 nke ọgwụgwọ iji Phosphatidylserine na mgbakwunye omega-2014 abụba bara uru n'ịgwọ ADHD. Givenmụaka nyere Nchikota edebanyere aha ha ịkpa ike ma ọ bụ omume na-eme ka ọnọdụ ha kawanye mma. N'afọ 36, enwetara ọmụmụ ihe iji nyochaa phosphatidylserine na-etinye ihe n'ime ụmụaka XNUMX na-arịa ADHA ọnwa abụọ. Na njedebe nke ọmụmụ a, ndị otu ahụ gosipụtara ihe ncheta na nlebara anya ka mma.
Ihe ndị ọzọ a kpọtụrụ aha n’elu, a na-ejikọkwa Phosphatidylserine na ike ịgba ọsọ anaerobic, belata ike ọgwụgwụ na ịdị mma nhazi ya na ọsọ ọsọ.
Kedu ihe bụ phosphatidylserine?
Phosphatidylserine bụ phospholipid-karịa nke a glycerophospholipid -nke mejupụtara abụba abụba abụọ ejikọtara na njikọ ester na nke mbụ na nke abụọ carbon nke glycerol na serine jikọtara site na njikọ phosphodiester na carbon nke atọ nke glycerol.
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Phosphatidylserine (PS)?
Daysbọchị ụfọdụ, ụbụrụ anyị na-adị ka ihe akpachiri ekpuchi ma ghara ịrụ ọrụ ọ bụla. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a na-eme n'ihi ịjụ ịrụ ọrụ mmụọ, steeti nke ndị okenye na-ahụkarị mana ọ bụghị obere na ndị na-eto eto. N'ime afọ ole na ole gara aga, ndị sayensị na ndị nchọpụta egosila na obi siri ha ike na ikike Phosphatidylserine nwere ike ịgwọta ikike nghọta na-ebelata. Nke ka mkpa bụ na, nchọpụta na-eto eto na mpaghara ahụ ekpughere ndị mmadụ na uru ndị ọzọ Phosphatidylserine, dị ka ikike ya ịgwọ ọnọdụ, dịka ọrịa Alzheimer na ADHD yana ikike ịkwalite ụra ma mee ka ọnọdụ dịkwuo mma.
Tupu anyị abanye na nkọwa nke ihe Phosphatidylserine na-eme maka ahụ mmadụ, ka anyị buru ụzọ ghọta ihe Phosphatidylserine (PS).
Kedu ihe Phosphatidylserine (PS) na-eji?
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọchịchọ maka mgbakwunye Phosphatidylserine amụbawo nke ukwuu n'ihi ọtụtụ ojiji nke Phosphatidylserine (PS). Maka ndị na-ebido ebido, Phosphatidylserine na-arụ ọrụ nke ọma na ime ka ọrụ ọgụgụ isi dị elu ma na-ebelata ọdịda ọgụgụ isi. N'otu aka ahụ, o gosipụtakwala na ọ dị irè megide ADHD na ụmụaka yana ndị okenye ma na-arụ ọrụ nke ọma mmega ahụ site na mbenata ogo cortisol n'ime ahụ. A makwaara ya iji mee ka uche mmadụ, ncheta ọrụ ya na mmega ahụ ya pụta.Phosphatidylserine makwaara ịbụ ọnọdụ na ụra na-ehi ụra. N'ihi ihe ndị a niile na ndị ọzọ, ọchịchọ maka mgbakwunye Phosphatidylserine amụbawo nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga.
Ego ole ka phosphatidylserine m kwesịrị iwetu cortisol?
Ziri ezi usoro onunu ogwu nke Phosphatidylserine (PS) dabere na uru nke a na-ewere ya. Nkwenye zuru ezu bụ na usoro onunu ogwu nke 100 mg, were ugboro atọ kwa ụbọchị, si otú a na-agbakọta na 300 mg kwa ụbọchị, dị mma ma dị irè megide nkwụsị uche. N'aka nke ọzọ, mgbe a na-eji Phosphatidylserine agwọ ADHD, a na-ewere usoro nhazi nke 200 mg kwa ụbọchị dị mma maka ụmụaka na 400 mg kwa ụbọchị ka a na-ahụta maka ndị okenye. Maka Alzheimer, a na-ewere usoro ọgwụgwọ nke 300-400 mg dị mkpa. Ọ bụrụ na a na-eji mgbakwunye Phosphatidylserine mee ihe iji meziwanye mmega ahụ, a na-agwa ndị ọrụ ka ha gafere oke ọgwụ 300 mg kwa ụbọchị.
Kedu ka ị ga-esi belata ogo cortisol?
Can nwere ike iji mgbakwunye nke PS kwa ụbọchị maka ụbọchị 10 na-emeghachi omume cortisol tupu oge na n'oge mmega ahụ na-akpata nrụgide.
Gịnị bụ cortisol n’ahụ gị?
Cortisol bụ hormone steroid nke na-achịkwa usoro dịgasị iche iche n'ime ahụ, gụnyere metabolism na mmeghachi omume ahụ. O nwekwara ọrụ dị oke mkpa n'inyere ahụ aka ịza nrụgide.
Ego ole ka phosphatidylserine dị na soy lecithin?
Akụkụ ndị bụ isi nke lecithin sitere na soybean nke azụmahịa bụ: 33-35% Soybean mmanụ. 20-21% Phosphatidylinositols. 19-21% Phosphatidylcholine.
A na - ahụ Phosphatidylserine na soy lecithin na ihe dịka 3% nke phospholipids niile.
Kedu mgbe ị kwesịrị ị were phosphatidylserine?
Phosphatidylserine na-arụ ọrụ na nke mbụ, mgbe ọkwa cortisol dị elu. A na-ewere ya nke ọma mgbe ọkwa cortisol dị na elu ha. Dị ka ihe atụ, ị̀ na-eteta n'ụra nrụgide n'ihi nrụgide ọrụ? Were ya n'ụtụtụ iji gbochie nchekasị na nrụgide na-abawanye.
Ekwesịrị ị phospụ phosphatidylserine n'abalị?
Phosphatidylserine (PS 100; were otu abụọ na ụra). Phosphatidylserine bụ ihe mgbakwunye na-edozi ahụ nke phospholipid nke na-akwụsị nrụpụta nke cortisol na ahụ, na-ekwe ka ahụike, ogo cortisol dị elu belata, yana n'ihi ya, ụra zuru ike na-eme.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka phosphatidylserine ịmalite ọrụ?
Inweta phosphatidylserine nwere ike imeziwanye ụfọdụ mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer mgbe izu 6-12 gachara. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ kachasị mma na ndị nwere obere mgbaàmà.
Kedụ nsogbu ndị dị na phosphatidylserine?
Phosphatidylserine nwere ike ibute mmetụta ndị dị ka ehighị ụra nke ọma na afọ ojuju, ọkachasị na ihe karịrị 300 mg. Enwere ụfọdụ nchegbu na ngwaahịa sitere na isi anụmanụ nwere ike ibunye ọrịa, dịka ọrịa ara ehi.
Kedu ihe dị iche na L serine na phosphatidylserine?
L-serine bụ amino acid dị mkpa maka njikọta nke phosphatidylserine, nke bụ ihe mejupụtara akpụkpọ ahụ nke sel ụbụrụ (yabụ, akwara ozi). Enwere ike ịmepụta ya na ahụ, gụnyere ụbụrụ, mana nnweta sitere na nri dị mkpa iji jigide ọkwa dị mkpa.
Kedu ihe na-akpata ụkọ serine?
Ọrịa serine na-akpata ntụpọ na otu n'ime enzymes atọ na-arụ ọrụ nke ụzọ L-serine biosynthesis.
Kedu ihe L Tyrosine na-eme maka ahụ?
Nwere ike ịhụ tyrosine nke erere n'ụdị mgbakwunye yana ma ọ bụ na-enweghị "L." Tyrosine dị na anụ ahụ niile nke ahụ mmadụ na ọtụtụ n’ime mmiri ọ .ụ .ụ ya. Ọ na - enyere ahụ aka ịwepụta enzymes, homonụ thyroid, na melandin pigmenti ahụ. Ọ na - enyere ahụ aka na - emepụta ụbụrụ na - enyere mkpụrụ ndụ akwara ozi.
Gịnị bụ ọrụ nke serine?
Serine bụ pola amino acid nke na-arụ ọrụ dị mkpa na metabolism metabolism, mmepe osisi, na sel siginal. Na mgbakwunye na ịbụ ngọngọ ụlọ maka protein, Serine na-esonye na biosynthesis nke biomolecules dị ka amino acid, nucleotides, phospholipids, na sphingolipids.
Kedu nri ndị dị elu na phosphatidylserine?
You nwere ike ịkwalite oriri gị nke phosphatidylserine n'agbanyeghị nri-ọ dị n'ọtụtụ nri, gụnyere soy (nke bụ isi iyi), agwa ọcha, nkochi ime akwa, imeju ọkụkọ, na imeju anụ ehi.
Kedu uru ahụike nke phosphatidylserine?
Vitamin, mineral, na micronutrients dị na phosphatidylserine na-enye ụfọdụ uru ahụ ike dị mkpa. A maara Phosphatidylserine ka ọ bụrụ antioxidant, na-enyere aka belata mmetụta nke ihe egwu dị egwu na ahụ gị. Nke a nwere ike inye aka belata ihe ọghọm gị nke ịpụta ọnọdụ dịka ọrịa shuga na ọrịa kansa.
Kedu ka phosphatidylserine si arụ ọrụ dị ka ihe nrịbama nke apoptosis?
Human phospholipid scramblases (hPLSCRs) na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro sel sel. hPLSCR1 na-ebute apoptosis site na ikpughe phosphatidylserine na-agbasa ozi phagocytosis. HPLSCR3 na-agbatị mgbasa ozi cardiolipin na-agbatị mgbatị apoptosis na mitochondria.
Phosphatidylserine ọ bụ amino acid?
L-serine bụ amino acid dị mkpa maka njikọta nke phosphatidylserine, nke bụ ihe mejupụtara akpụkpọ ahụ nke sel ụbụrụ (yabụ, akwara ozi). Enwere ike ịmepụta ya na ahụ, gụnyere ụbụrụ, mana nnweta sitere na nri dị mkpa iji jigide ọkwa dị mkpa
Kedu ọrụ bụ isi nke Phosphatidylethanolamine?
Phosphatidylethanolamine na-ekere òkè na nzukọ nke lactose permease na ndị ọzọ na-edozi ahụ. Ọ na - eme dị ka 'chaperone' iji nyere ndị na-edozi akpụkpọ ahụ aka ịpịkọta ụlọ akwụkwọ ha nke ọma ka ha wee rụọ ọrụ nke ọma.
You nwere ike ịnwe oke choline?
Inweta oke choline nwere ike ime ka isi ahụ dị na azụ, ịgbọ agbọ, ọsụsọ na ịsọ mmiri, ọbara mgbali elu, na mmebi imeju. Nnyocha ụfọdụ na-egosikwa na oke choline nwere ike ime ka ohere nke ọrịa obi.
Ndi phosphatidylserine bu mmanu?
Phosphatidylserine (PtdSer), ihe dị mkpa dị na membranes eukaryotic, bụ phospholipid anionic kachasị ukwuu na cell eukaryotic na-eme ihe ruru 10% nke mkpokọta cellular ngụkọta. Ọtụtụ n'ime ihe a maara banyere PtdSer bụ ọrụ exofacial PtdSer na-arụ na apoptosis na mkpụkọ ọbara.
Kedu ihe eji eme phosphatidylcholine?
A na-ejikwa Phosphatidylcholine maka ịgwọ ịba ọcha n'anya, eczema, ọrịa gallbladder, nsogbu mgbasa, nnukwu cholesterol, na premenstrual syndrome (PMS); maka imeziwanye irè nke dialysis akụrụ; maka ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ; na maka igbochi ịka nká.
Ndi phosphatidylserine bu zwitterionic?
Ndị na-edozi ahụ jikọtara phospholipids na-ezighị ezi (cardiolipin, phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, phosphatidylinositol) ma ọ bụghị zwitterionic ma ọ bụ neutral phospholipids (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine).
Ihe phosphatidylserine bụ otu na phosphatidylcholine?
The phospholipids phosphatidylserine (PS) na phosphatidylcholine bụ nke abụọ a na-akwadokarị maka ndị toro eto nwere mkpesa ncheta site n'aka ndị nwere ihe mgbakwunye nri.
Ndi phosphatidylcholine nwere obere cholesterol?
Ogwu polyunsaturated phosphatidylcholine na-ebelata platelet lipid na ọdịnaya cholesterol na ndị ọrụ afọ ofufo ahụike.
Ndi phosphatidylserine na enyere aka n'ibelata?
Na nkenke, phosphatidylserine na-enyere aka na ọnwụ ọnwụ site na ịchịkwa ọkwa cortisol. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ: na nzaghachi na nrụgide, gland adrenal na-emepụta hormone a na-akpọ cortisol. Ọ na-abanye n'ọbara ngwa ngwa ma nye gị ohere ịnagide mmegharị nke mpụga.
Phosphatidylserine (PS) Ọche Nchekwa?
Nnyocha e mere mere na-ekpughe na Phosphatidylserine na-anabata ahụ nke ọma na mgbe a na-eji ọnụ ekwu okwu, ọ dị mma iji Phosphatidylserine ruo ọnwa 3 na usoro ọgwụgwọ kwa ụbọchị karịa 300 mg kwa ụbọchị. Canmụaka nwere ike were ihe mgbakwunye ndị a ruo ọnwa 4. Agbanyeghị, ị gafee ọgwụ kwa ụbọchị karịa 300 mg kwa ụbọchị nwere ike ibute nsonaazụ dịka nsogbu ehighị ụra nke ọma na nsogbu afọ. Womenmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye ara ara kwesịrị ịnọpụ na mgbakwunye Phosphatidylserine ebe ọ bụ na enweghị ihe akaebe zuru oke iji gosipụta na mgbakwunye ndị a dị mma maka ndị otu a.
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ihe mgbakwunye Phosphatidylserine sitere na osisi dịka e kwenyere na nri sitere na anụmanụ na-ekpughe ndị ọrụ na ọrịa anụmanụ. Agbanyeghị, enweghị nnyocha nyocha achọpụtarala ihe akaebe ọ bụla doro anya iji kwado echiche a.
Ebee ka ịzụta Phosphatidylserine (PS) ntụ na nnukwu?
Ma ị bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta mgbakwunye Phosphatidylserine ma ọ bụ onye chọrọ ịzụta ntụ ntụ Phosphatidylserine (PS) n'ọtụtụ maka ebumnuche ndị ọzọ, ebe kachasị mma iji zụọ ahịa bụ. cofttek.com.
Cofttek bụ a emeju akụrụngwa emeputa na kemgbe na ahịa kemgbe 2008. The ụlọ ọrụ na-agba mbọ iji na-amị elu-edu ngwaahịa na nwere a ukwuu-ọkà na ahụmahụ nnyocha otu na-arụ ọrụ gburugburu-na-na-elekere iji hụ na-azụ ahịa na-na-kacha mma. ngwaahịa dị mma maka ego ha. Cofttek enweworị ndị ahịa na ndị ahịa n'akụkụ dị iche iche nke India, China, Europe na North America. O nwekwara otu ndị ahịa raara onwe ha nye nke na-eme ka ndị ahịa ụlọ ọrụ ahụ niile ghọọ ndị ahịa obi ụtọ. Mkpụrụ ntụ Phosphatidylserine nke Cofttek nyere na-abịa na nchi nke kilogram 25 ma nwee ntụkwasị obi kpuru ìsì maka ịdị mma na ntụkwasị obi. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-ele anya zụta ntụ ntụ Phosphatidylserine (PS) na nnukwu, anaghị ịzụ ahịa n'ebe ọ bụla ọzọ ma na Cofttek.
(2) Kwusara: Phosphatidylserine na ụbụrụ mmadụ
(3) Mmetụta nke mgbakwunye phosphatidylserine na imega mmadụ
(4) Otu lecithin phosphatidylserine na phosphatidic acid complex (PAS) na-ebelata mgbaàmà nke ọrịa premenstrual syndrome (PMS): Nsonaazụ nke usoro nlekọta ụlọ ọgwụ na-achịkwa, ebe a na-achịkwa, nke nwere ihu abụọ.
(5) Onye nkuzi: Phosphatidylserine
(13) Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).